Caribbean Airlines dia manafoana ny sidina noho ny tafiotra tropikaly Dorian
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Caribbean Airlines dia manafoana ny sidina noho ny tafiotra tropikaly Dorian
Aogositra 26, 2019
Mpandeha fiaramanidina Caribbean Airlines manidina sy mivoaka
Seranam-piaramanidina iraisampirenena Piarco, Trinidad
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Grantley Adams, Barbados
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Norman Manley, Kingston, Jamaika
amin'ny 26-28 Aogositra 2019 dia afaka mamerina ny sidina ho an'ny dia hatramin'ny 8 septambra 2019 noho ny fandrahonana nataon'ny Tropical Storm Dorian.
Nanambara ny fanafoanana an'ireto sidina manaraka ireto ny zotram-piaramanidina ny Alatsinainy 26,20190 Aogositra
Port-of-Spain mankany Barbados
Barbados mankany Port-of-Spain
Kingston mankany Barbados
Barbados mankany Kingston
BW 459 Port-of-Spain mankany Barbados
Tamin'ny Alahady CDT tamin'ny 7 hariva dia tany amin'ny 225 kilaometatra atsinanana atsinanana atsinanan'i Barbados no nifindra niankandrefana 14 mph ny Tropical Storm Dorian. Nanomboka omaly dia nahatratra 50 MPH ihany koa ny rivotra.
Dorian, ny tafiotra tropikaly fahefatra amin'ny vanim-potoana rivodoza Atlantika, dia manohy manatanjaka rehefa miakatra mankany amin'ny Nosy Windward. Dorian dia antenaina hitondra toetoetran'ny tafiotra tropikaly any amin'ny faritra sasany amin'ireo nosy Lesser Antilles. Fampitandremana amin'ny tafio-drivotra tropikaly dia manan-kery ho an'i Barbados, St. Lucia, St. Vincent ary ny Grenadines. Nisy fiambenana tafio-drivotra tropikaly navoaka ho an'i Grenada sy Martinique.
Ny faritra sasany akaikin'ny Lesser Antilles dia antenaina handray orana roa ka hatramin'ny efatra santimetatra, ary hatramin'ny enina santimetatra ny habetsaky ny ao an-toerana ny talata sy alarobia.
Ny National Hurricane Center dia nilaza tamin'ny alahady farany teo tao Dorian fa ny tafiotra tropikaly dia mety hihamafy hatrany akaikin'ny tafio-drivotra ambonin'ny ranomasina Karaiba ny talata talata teo.
Mbola aloha loatra ny hamaritana raha hisy fiantraikany amin'ny faritra any Etazonia mifanakaiky i Dorian, na koa ny làlany marina aorian'ny namakivakiana ireo nosy Windward. Misy vintana mety hahalemy an'i Dorian ny nosy Hispaniola, na ny mankany avaratry ny nosy ary mijanona ny rivodoza mankany amin'ny tapaky ny herinandro.
Ny mponina any Puerto Rico, ny Repoblika Dominikanina, Haiti, ary ny Nosy Virgin US dia tokony hijery tsara ny Tropical Storm Dorian sy ireo vinavina ao aminy.
Tsenan'ny rafitra fifampiresahana fiara mifehy - Sehatra fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fiarovana
MGM Hotels and Resorts mandresy lalao famitahana sy fanaovana an-keriny